Akụkọ - Wheel Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ dị ka isi mmalite nke Nitrile Gloves FDA kwadoro na US.
Wheel Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ dị ka isi mmalite nke Nitrile Gloves FDA kwadoro na US
Wheel Frozen, onye isi na-ekesa nri na PPE, na-ekwupụta mmeghe ụlọ ọrụ na Thailand maka nzaghachi na-arịwanye elu maka uwe nyocha nitrile na-enweghị ntụ ntụ.
“Ọrịa COVID-19 butere ihe ịma aka maka ụlọ ọrụ ahụike iweta uwe aka dị mma site na nkwado FDA na Wheel Frozen na-agbagokwa aka ịma aka ahụ ọzọ site na iguzobe ọfịs mpaghara na mba Thailand na ijikwa njikwa ọkọnọ. ijide n'aka na ndị ahịa anyị nwere ihe dị mkpa a dịla njikere, "Isaac Halwan, onye isi oche Frozen Wheel kwuru na nzukọ ya na ụfọdụ ngwaọrụ ahụike na ndị na -azụrụ ahụike kwuru.
Ụlọ ọrụ ahụ kwupụtakwara na ọ nọ na ngwụcha ikpeazụ ịbịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ abụọ maka ngụkọta nde nde aka 500 ọzọ ga -adị na USA na 2020. A maara Thailand gburugburu ụwa maka imepụta glori nitrile kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ nọ na ntọala nke ihe a na ụfọdụ ndị nrụpụta kacha ibu. Wheel Frozen na -atụ anya iwe ndị ọrụ iri ngwa ngwa ka ha lekọta nkwekọrịta na eriri ọkọnọ iji hụ na enyochala ma nyefee ngwaahịa n'oge. Ọfịs mpaghara ga-eleba anya n'ịmepụta nkwekọrịta ndị ọzọ yana iwulite mmekọrịta siri ike na ụlọ ọrụ mpaghara yana ntinye ogologo oge itinye ego na akụ na ụba Thailand na nkwekọrịta na-enweghị atụ iji nye ndị ahịa ahụike ya na United States.
Isaac Halwan kwukwara, "Anyị ji akụrụngwa nchekwa onwe anyị na -arụ ọrụ ụlọ ọrụ na ọ bụ ọrụ anyị ịnwe ngwaahịa ndị a dị njikere maka ndị ahịa anyị ka ha nwee ike lekwasị anya n'ịchekwa ndụ," Isaac Halwan kwukwara.
Banyere wiil oyi kpọnwụrụ
Guzosie ike na 2010, Wheel Frozen bụ onye na -ebubata na onye na -ekesa nri na akụrụngwa nchekwa onwe. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ karịrị mmadụ 150 na South Florida ma nweekwa ụgbọ ala gwongworo nwere nchekwa na ụgbọ njem, si otú a na-enye ụlọ ọrụ ahụ ọgwụgwụ na njedebe. Wheel Frozen nwekwara ọtụtụ nkwado na asambodo FDA ma na -emepụta ọtụtụ nri na ngwaahịa PPE nke ọ na -ekesa n'ụlọ nri, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ahụike.